घण्टौँ हिँडेर विद्यालय पुग्छन स-साना बालबालिका ! — Himali Sanchar
घण्टौँ हिँडेर विद्यालय पुग्छन स-साना बालबालिका !
प्युठान : माण्डवी गाउँपालिका–१ कुमालटारकी कृष्णा ठेडी बिहान ६ बजे उठ्छिन्। राम्रोसँग हातमुख धुन नपाउँदै उनलाई विद्यालय हिँड्न हतार हुन्छ। केहीबेर घरमा ढिला गरिहाले साथीहरूले छाड्छन्। ३ घण्टा पैदल यात्रापछि मात्र उनी विद्यालय पुग्छिन्। बिहानै गाडी पाउँदैन। संयोगवश गाडी भेटिहाले पनि रोक्दैनन्।
ठेडीलाई राम्रोसँग पढ्नेभन्दा धेरै पिरलो विद्यालय पुग्ने र फर्किनेमै हुने गरेको छ। बिहान घरमा परिवारसँग बसेर खाना खानु उनका लागि बिरानो बनिसक्यो। चिया, नास्ता खाएर टिफिनको खाना बोकेर उनी दिनहुँ विद्यालय पुग्ने गर्छिन्। अतिरिक्त कक्षा र ट्युसन पढ्दा पाँच बजे नै उनी विद्यालय हिँड्नुपर्छ। दिन छोटा हुँदा अँध्यारोमा हिँड्नै मुस्किल हुने गरेको उनी दुःखेसो पोख्छिन्।
नौ कक्षामा अध्ययनरत १७ वर्षकी ठेडीको दैनिकी विद्यालय आउने–जाने चिन्ताले बित्ने गरेको छ। थकानले गर्दा राम्रोसँग पढ्न पाउँदैनन्। झोलाभरि कापी, किताब बोकेर उनीसहित थुप्रै विद्यार्थी घण्टौँ पैदल यात्रापछि मात्र विद्यालय पुग्ने गरेका छन्। माण्डवी माध्यमिक विद्यालय नयाँगाउँमा पढ्न जाने टाढाका बालबालिकाले वर्षौंदेखि यस्तै पीडा झेल्दै आएका छन्।
११ किलोमिटर टाढाको दूरीबाट बालबालिका हिँडेर विद्यालय पुग्ने गर्छन्। थक्लेनी, कुमालटार, सिमलचौर, एकचोटेलगायत क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालय पुग्नै सकस हुने गर्छ। जसपुर, चकचके, आपचौर, सल्लीकोट, नरसुउदयपुरकोट, धाइरेचौर र भलावाङका बालबालिकासमेत घण्टौँ हिँडेर विद्यालय जाने गर्छन्।
‘स्कुलमा पुग्दा खुट्टा दुख्छन्’, ९ कक्षामा अध्ययनरत थक्लेनीकी १५ वर्षीया सेमन्ता उलुङेले भनिन्, ‘६ बजे हिँड्नुपर्छ। थकाइ लागेर पढ्नै सकिँदैन।’ आठ कक्षासम्म जस्पुरस्थित भवानीश्वरी आधारभूत विद्यालयमा पढेको उनले सुनाइन्। माध्यमिक विद्यालयमा आउजाउ गर्न करिब २२ किलोमिटर हिँड्नुपर्छ।
गाउँमै माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालय नहुँदा टाढाका बालबालिका घण्टौँ हिँडेर विद्यालय पुग्ने गरेका छन्। बस्ती छरिएकाले टाढाका गाउँमा मावि सञ्चालन गर्न समस्या हुने सम्बन्धित विद्यालयले जनाएका छन्। ६ कक्षादेखि माथिका २ सय ७१ जना विद्यार्थी आउजाउ गर्दा झण्डै ६ घण्टा हिँडेर विद्यालय आउने गरेको प्रधानाध्यापक मेघराज पौडेलले जानकारी दिए।
‘स्कुल बस सञ्चालन गर्न सके विद्यार्थीलाई धेरै सहज हुने थियो’, उनले भने, ‘विद्यालयले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। साना बालबालिका घण्टौं हिडेर स्कुल आउँदा साह्रै पीडाबोध हुन्छ।’ पढ्न आउने विद्यार्थीको घरघरमा गाडी पुग्ने मोटरबाटोको सुविधा भए पनि स्कुल बस सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले सुनाए।
कतिपय बालबालिकाले विद्यालय आउन–जानका लागि साइकल किनेका छन्। तर, त्यसले दिगो समाधान दिन सकेको छैन। सबैको पहुँचमा साइकल नहुँदा अझ विद्यार्थीमा मनोबल घटाएको पाइएको छ। जिल्लाकै अब्बल मानिने उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बर्सेनि थपिँदै गएको छ। माण्डवी गाउँपालिकाले पालिकामध्येबाट नमुना विद्यालयका रूपमा यसै विद्यालयलाई अघि सारेको छ। उक्त विद्यालयमा ८ सय ७० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको प्रधानाध्यापक पौडेलले बताए।
कार्यकक्षमै मस्त निद्रामा पशुपन्छी सेवा कार्यालयका प्रमुख यादव !
सरकारले पूर्वाधारमैत्री ऐन ल्याओस् : अध्यक्ष सिंह
वडा नम्बर १४ को भवनको शिलान्यास, अण्डरग्राउण्ड पार्किङदेखि सुविधासम्पन्न लिफ्ट
गायक पशुपति शर्मा किन गएनन् पदक थाप्न ?
अछामको ठाँटी गाउँ पुरै लालपुर्जाविहीन
मेघाश्री गुट्खाको अबैध कारोबार मौलाउदो
कोहलपुरका डिएसपीलाई कारवाही गर्न आयोगको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस
कमल न्यौपाने बैशाख ९, नेपालगन्ज : राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर बाँकेका...
यो पापको मेला हो भलाई राख्न मिल्दैन मुटुलाई दाउरा जस्तो जलाई राख्न मिल्दैन मेरी आमा...
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन : प्रचण्डको प्रशंसा, कांग्रेसमाथि निशाना
काठमाडौं, ९ बैशाख : जिल्ला पदाधिकारी चयनका सकस पास लगाएको भोलिपल्ट ७० औं स्थापना दिवस...
आज २०७६ साल वैशाख ९ गते, सन् २०१९ अप्रिल २२ तारिख सोमबारको राशिफल
राप्रपालाई वार्ताका लागि सरकारको पत्र
८ बैशाख, काठमाडौं : हिन्दुराज्य र राजतन्त्र र संघीयताबारे जनमतसंग्रहको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र...
गीतादेबी र नवराजको स्वरको गीतमा सन्जिब र आयुस्माको बबाल नृत्य (भिडियो सहित)
चर्चित गायक शक्ति चन्द र टीका सानूको आवाजमा “झिल्के माया” बजारमा (भिडियो सहित)
जनताका माग पूरा नभए भेरीको पानी बबईमा बग्न नदिने महामन्त्री खड्काको चेतावनी
राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर भबिष्यबाणी गर्ने माता सबिता सरूको अडान कायमै
युएईमा अतिथि कलाकारका साथमा जेहेन्दार छात्रवृतीकोष सहयोगार्थ कलम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै
महामन्त्री खड्काले वैशाख ३ मा जाजरकोट र ४ गते सिम्ताको जामुनेबजारमा सम्बोधन गर्ने
आफ्नै विवाहको कार्ड बाँड्न हिडेका खत्री अटो पल्टीदाँ गम्भीर घाईते
रकम हिनामिनामा उपमेयर पनि संलग्न भएको खुलासा
बनगाड कुपिण्डेको कफलेनीमा पहिलोपटक बस पुग्यो
बारा-पर्सामा धनजनको क्षति प्रती गैरआवासीय नेपाली संघ मकाउद्वारा दुख व्यक्त, सहयोग गर्न सबैमा अपिल !